Sida Loo Sameeyo Watermark iyadoo Sawir Qaade Deg Deg Ah | Abuurista khadka tooska ah
Pablo Gonder | | Photoshop, Khayraadka, Tababarada
Sidee ku samee calaamad sawir leh Photohop dhaqso u hesho ilaali dhamaan mashaariicdaada garaafka ah nooc kasta oo khayaano ah. Aad bay u badan tahay in laga helo astaamo-biyoodyo sawirro ka bixinaya difaac dheeri ah oo la xiriirta lahaanshaha dhammaan noocyada maaddada garaafka, tanina waa mid aad waxtar u leh in la gaaro muuji qoraaga sawirka hal dhinac iyo ilaali dhanka kale.
Baro inaad kudar calaamadeynta si dhakhso leh oo fudud shaqadaada oo dhan si aad naftaada uga ilaaliso shabakadaha xatooyada suuragalka ah ee sawirrada. Waa run inaan ka heli karno sawirro badan shabakadaha ay astaamo-biyoodyadu aad u yar yihiin maxaa yeelay qof kasta oo doonaya inuu xado sawir wuxuu ku sameeyaa si uun ama mid kale, weli waa xiiso leh in lagu daro astaan-biyood u istaagaan sidii fanaaniin shaqooyinkeena oo dhan.
Si loogu daro calaamadeynta waxa ugu horreeya ee aan u baahan nahay inaan sameyno ayaa leh sawir aan u adeegsan doonno astaan-biyood, waxa ugu caansan waa in la isticmaalo a astaan ​​ama qaab qoraal magaca qoraaga. Shabakadda waxaan ka heli karnaa noocyo badan oo summad-biyoodyo ah taasi way kuxirantahay waxayna kuxirantahay farshaxanka, waxaa jira fanaaniin doorbida inay adeegsadaan astaan-biyood fudud oo aad uxun kuwa kalena waxay doorbidayaan astaan-biyood kujira sawirka oo dhan, heer shaqsiyeed waxaan doorbidaa astaan-biyood aad u khiyaano badan oo aan muuqaal aad u badan ka muuqan.
Guud ahaan, astaan-biyood ayaa leh astaamaha soo socda:
Es yar yar
Waxay leedahay madmadow yar
Hal khad (madow ama cadaan)
Waxaan raadineynaa ama abuureynaa sawir aan u adeegsan doonno sida calaamadeyn hadhowna waan ka fureynaa Photoshop.
Markii calaamadeena la furay Photoshop waxa xiga ee ay tahay inaan sameyno ayaa ah hoos u dhig mugdiga oo buuxi pSi looga dhigo mid hufan. Caadiga ah (ugu caansan) waxaa loogu talagalay astaan-biyood si uu u yeesho mugdi hooseeya oo hooseeya oo buuxiyo, gaaro soo jiito fiiro yar.
Markaan hoos u dhigno mugdiga iyo buuxinta astaanteenna, waxa xiga ee ah inaynu qabanno ayaa ah dib u cabir si ay ula jaanqaado a hal cabir, waxaan go'aansanaa cabirka iyadoo loo eegayo baahiyaheena. Si aan u bedelno cabirka astaanteena waa inaan tagnaa liiska kore ee Photoshop oo raadi ikhtiyaarka ah cabirka sawirka / sawirka.
Waxaa si weyn lagu talinayaa marwalba isticmaal qaab isku mid ah biyo-biyood Si loo abuuro khad naqshadaysan oo had iyo jeer isku mid ah, waa inaan iska ilaali inaad haysato kumanaan nooc oo calaamado-biyoodyo ah laakiin si fudud marwalba iskumid u isticmaal dhamaan sawiradeena.
Mar alla markii aan beddelnay cabirka astaamaheena, waxa xiga ee ah inaan sameyno waa ku keydi sawirka qaabka PNG si aysan u laheyn nooc asal ah oo ay u isticmaali karto dhibaato la'aan.
Ka dib markii aan ku keydinay calaamadeena qaab-dhismeedka PNG waxaan awoodi doonnaa inaan u adeegsanno dhib la'aan dhammaan sawiradayada. Si aan u isticmaalno calaamadeynta biyaha, waxa kaliya ee aan sameyno waa jiid sawirka in laga furo sawir gudaha Photoshop.
Daqiiqado yar gudahood ayaan ku baranay samee sumad-biyood noo gaar ah, waa geedi socod aad u dhaqso badan oo waxtar leh oo naga caawin kara inaan si fiican u ilaalino una iftiimino dhamaan shaqadeena garaafka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tababarada » Sida loo abuuro astaan-biyood leh Photohop